के के छ, बाम गठबन्धनको ९ बुँदे प्रतिबद्धता–पत्रमा ? – ebaglung.com
के के छ, बाम गठबन्धनको ९ बुँदे प्रतिबद्धता–पत्रमा ?
२०७४ कार्तिक ११, शनिबार १९:१६	अन्य समाचार
विजय राना, बागलुङ २०७४ कात्तिक ११ । बागलुङमा संयुक्त वाम गठबन्धनले ९ बुँदे प्रतिबद्धता–पत्र तयार पारेकोे छ । प्रतिबद्धता–पत्रमा जिल्लाको विकासको लागि पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई एक नम्बरमा राखिएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाको वलेवा क्षेत्रमा आयात निर्यात केन्द्र र बागलुङ बजार, पैयुपाटा, कुश्मिशेरा, खहरे, अक्षेते, विहुँ सुल्डाँडा, रिजालचोक, गल्कोट हटिया, हरिचौर, खरवाङ, बुर्तिवाङ बजार, ढोरपाटन आदिलाई व्यापार केन्द्रको रुपमा विकास गर्न व्यवस्थित शहरीकरण तथा पूर्वाधार विकास गर्नमा विशेष जोड दिइने प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । साथै ग्रामिण शहरलाई प्रविधिमैत्री बनाइने पनि उल्लखे गरिएको छ ।
प्रतिबद्धता–पत्रको २ नम्बरमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार उल्लेख गरिएको छ । बागलुङ नगर पालिकामा एउटा मेडिकल कलेज र अन्य गाउँ पालिका र नगरपालिकाहरुमा विशेषज्ञ सेवा सहितको अत्याधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल निर्माण गरिने उल्लखे गरिएको छ ।
४ नम्बर बुँदामा खेलकुदको विकासको लागि बागलुङ नगर पालिका वडा न. १ मा रहेको बाङ्गेचौर खेल मैदानमा अत्याधुनिक तथा व्यवस्थित खेलकुद तथा रङ्गशाला निर्माण गर्ने उल्लखे गरिएको छ भने प्रत्येक वडामा खेलकुद मैदान निर्माण गरिने बताइएको छ ।
पर्यटनको अत्यन्त सम्भावना भएको बागलुङको पर्यटनको विकासको लागि जिल्लामा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गरिने बताइएको छ । पर्यटन विकासको लागि बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, घोडेजात्रा सञ्चालनमा विशेष जोड दिइने उल्लखे गरिएको छ ।
जिल्लामा सञ्चालित साना विद्युत आयोजनाहलाई मिनिग्रेडको अवधारणालाई प्रथामिकता दिई राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्नको लागि आवश्यक पहल गर्ने समेत प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लखे गरिएको छ ।
कृषिलाई पनि प्रथामिकता साथ समावेश गरिएको छ । कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने, कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टचार, कालोबजारी, महंगी र अराजकताविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दै विधिको शासन कायम गरि नगरमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको वातावरण सिर्जना गर्ने समेत प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिबद्धता–पत्रको बुँदा न. ९ विविधमा अन्यायको विरुद्ध हाम्रो अभियान, आवाजविहीनको आवाजलाई गर्छौ सम्मान भन्ने मूल नाराका साथ महिला हिंसा, छुवाछूतजन्य विभेद एवं सामाजिक विभेदलाई अन्त्य गरी सभ्य समाज निर्माण गर्नका लागि समतामूलक कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने उल्लखे गरिएको छ ।
समृद्ध बागलुङ निर्माणको लागि बाम गठबन्धनका उमेदवारलाई जिताउन समेत प्रतिबद्धता–पत्रमा आग्रह गरिएको छ । आफ्ना प्रतिबद्धाले बागलुङलाई समृद्ध बनाउने भन्दै त्यसको कार्यन्वयनको लागि पनि आफुहरुले जित्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिबद्धता–पत्रमा बाम गठबन्धन समग्र जिल्लाको विकासको लागि भएको बताइएको छ ।
काँग्रेस कमजोर भए फोरम दोश्रो, नत्र तेस्रो पार्टी हुने निश्चित – घर्ती
नव जन विकास सहकारीको चौथो साधारण सभा सम्पन्न